Ex- Gacaliye..Farriintani Waxa Kaaga Imaaneysa Qof Kuu Furtay Laabteeda, kula qaybsatay dhibtaada.. Nabsigaygu Kuma Helo | alcarabiya.com
Home » Sheekooyin » Ex- Gacaliye..Farriintani Waxa Kaaga Imaaneysa Qof Kuu Furtay Laabteeda, kula qaybsatay dhibtaada.. Nabsigaygu Kuma Helo
Ex- Gacaliye..Farriintani Waxa Kaaga Imaaneysa Qof Kuu Furtay Laabteeda, kula qaybsatay dhibtaada.. Nabsigaygu Kuma Helo
Bariida-san dabadeed, erayada farriintani xanbaarsan tahay waxay ka soo liigayaan qalbi naafoobay, naf qarracantay iyo maan qayirmay. Waxaanay ku Saabsan Yihiin wiil-ku-sheegii hanaqa iyo halbowlaha jaray hoobaan la moodaa hilbaheedu quban yahay. Haddaba, qaladba ha igu ahaatee, aniga oo waqtiga kuu dhawraaya waxaan isku dayay inaan hadal-tirada badan ka saaro, oo aan nuxurkeeda uun kuu soo gudbiyo ee adigu falkiso oo falanqayso. Waxaanay u dhignayd sidatan:
Ex- gacaliye………….Farriintani waxay kaaga imanaysaa qof kuu furtay laabteeda, kula qaybsatay dhibtaada, kuu gargaartay goortaad u baahnayd, ku difaacday markaad maqnayd, ku dareensiisay inaanad kali ahayn, kaala qayb qaadatay farxadaada si ay u laban laabanto iyo murugadaada si ay u fududaato, dhagaysatay cabashooyinkaagii, tunkana u ridatay gefafkaagii. Haddaba, hadda ayuun baan ka soo miiraabay miyir doorsoonkii aan maalmahanba ku sugnaa, oo aan soo sare fadhiistay. Asxaabtii igu hareeraysnayd ma waydiin muxuu sidaa iigu sameeyay ee waxaan su,aalay: Tolow hadda xaalkiisu waa sidee?
Goortiise aad hantiday qalbigayga, huwatayna laabtayda, maxaad u halakaysay naftaydii taagta darnayd?	Alla maxaad beer-nugaylka kalgacalkaagu i baday ka faaiidaysatay oo aad asxaabtayda hortooda hadal qalbiga damqaya igu tidhi, anna aan iska dhega tiray sidii qof aan maqlayn. Maxaa dartaa iyo illaalinta axdigeena doqon laygu sheegay, dammiin la igu xantay, dadna aanu ku kala dhiman gaadhnay. Haddaba, Jacaylkii dhiiranaa, ee guyaalka aynu dhisaynay,dhibtana aan u marnay, dhammaadkiisii maxaad, dhimashadaa ula jeclaatay?
Naftaydii kuu hilowday, ee aad halyaygeeda ahayd, bal maxaad uba hiiftay, oo huqdaa aad u baday? Laabtaydii magacaaga, annigoo gabadha, oon garanaynin jacayl, guyaal aan ku xardhaayay, guulaheena ogaa, adna aad garanaysid, bal maxaad u giriiftoo, gebigaa uga tuurtay? Mise wada jirkeeniyo, jacaylkii dhexdeeniyo, maalmihii na soo maray waxay ahaayeen kuwa caadifada sindheernimo aan ku qaboojinaynay? Kuwa aan dhaafsiisnayn, dhayal la isku salaaxiyo, afkoo layska yar dhuuqiyo, bushimahoo laysku dhaweeyiyo, macaankii dhunkasheed? Kolay, kulama yaabani oo waxaad noqotay dhadhamo raac, taasaana keentay inaad Baasaboor iga raacdo oo aad curyaamiso jacaylkii guyaal dhexdeena ka ilmo roganayay. Waayo, waxaad ku talo jirtaa hirgalinta himiladaadii dhoof jacayl. Laakiin maanka gali, maalin baa iman doonta aad qiimigayga dhabta iyo sida qof iyo Baasaboor u kala qaalisan yihiin duruuf kasta oo jirta aad ogaan doonto.
Waxbase ma helin, Wax walbana waxa igaga darnaa dadkii isku keen yaqaanay oo mar walba i lahaa: Hebel goormaad kala hadheen? Maxaadse walaalay u sii daysay wiil fiican buu ahaaye?
Anniga oo dhibtaa iyo dhakafaarkaa qaba, haddana waxaan kugu galbinayaa gob iyo caadkeed, gabadha aad guursatay bilaahi calayk ha marin dhibtii aad i marisay, ha dhaawacin qalbigeeda ee u dhibirsanoow, Haddii aad magac yeelato ha ugu kibrin sidii aad isugu kay waynaysiin jirtay, hana bahdilin sumcadeeda iyo dhegteeda ilayn waa gabadhe. Haddii aad la kulanto dhibna Alleba kuuma keenee, ha is odhan nabsigii baa ku haya, waayo waan ku saamaxay annigu, waxaanan kuu rajaynayaa adiga iyo xaaskaaga cusubba khayr fara badan. Anna waxaan ku uursamahay inaan qof wanaagsan helayo insha alla, ee ii soo ducee.
Waa tahay, farriintan oo nuxurkeedu ahaa intaa, waxaan la yaabay dhugmo badnaanta gabadha iyo dhoohnaanta wiilka iyo dhicisawga jacaylka, dharaaraha soo taxnaa, Waxaanan ku idhi iyada oo ilmaynaysa markii ay farriinta ii sheegaysay: Armay sidani kuu roon tahay oo qaddarku kuu qarrinayaa qof si walba kuugu qalma, iima jawaabin waxaanse foolkeeda ka dareemay farxad. Halka aan wiilkana niyadda kaga idhi: Nabsi guratay wiilyahow, goor aad heshaba.
Axmed Ismaaciil Maxamuud (Axmed-deeq)
4 Responses to Ex- Gacaliye..Farriintani Waxa Kaaga Imaaneysa Qof Kuu Furtay Laabteeda, kula qaybsatay dhibtaada.. Nabsigaygu Kuma Helo	C/laahi Reply
February 9, 2013 at 7:59 am	Asc dhamaan shaqaalaha iyo sxbada kuxiran alcarabiya waan idinsalaamay
salaan kadib sxbyaal marka hore waxaan alle ooga baryayaa in uu alle gabadhan qalbigeeda daaweeyo oo uu halmaansiiyo wiilkii ku cayaaray ayadana ugu badalo midkalo qanciya oo an faca.
marka labad war dhalin yarooy xumaatada ha la joojiyo oo haddii aan daacad la isu ahaanayn naftana laysu huraynin duruuftana lawadaagaynin yaan marka hore jacayl laysku beerin, jacaylku maaha wax lagu ciyaaro qalbiguna ma ah wax la jabiyo.
waxaanse aad ooga xumahay in uu baasaboorkii ka qiimo badnaaday nafta gabdhihii jawharadaa iyo wiilashii qaaligaa
January 21, 2013 at 5:03 pm	asx gabadhas ilahey qalbikeda ha unadifiyo waxaase layaab leh 3 week ka hoor ayaan qoorey warqad sidan oo kale ah taalow ma warqadeydi ayaa laso copiyeey wanba naxey qoraalkan markan aqriyeey wana rumeysan waaye ma oogen dhiibkan weyn inleyla qaabo balse gabadhas waxaan ku dhiiri galinaya iney ka boogsan doonto waaye warqad saas ah waan qoorey inan udiirana waan rabey my ex mana udiirin waayo uma qalmo inu oogado xanuunka ihaayo ileen waaba farxadiise uuna igu taala gaaley balse jiihaad badan oon la kale nafteyda waan ka roonadey waxaana daarema inan good muugti ag inan ku jiirey iftiinkana uso baxey haawada caraaftedana waa darema ilaaha mahad leeh gabadhan qoraalka so diirtey waxan leyahey abaayo miid ayaa hubal ah waad ka boogsan doonta markasna waxaad heeli doonta qof ku koolkoliya waa hubal lakiin naftada waa inad jiihaad dheer la gasha hadi anigaba ka boogsadey dadku igu sheegeysan jiiirey adna waad ka boogsan doonta insha allah
Cali deeq Reply
January 21, 2013 at 2:53 pm	Masha’allah gabadhan sawirkeeda qurux badana timo qurxoon oo dhaadheer bey leedahay FG: ma’ogtahay gabadha timaha dhaadheer weyka raaxo badantahay mida timaha gaagaaban gabadha sanka dheer sanqaroorka shuban weyka raaxo badantahay mida sanka kuusan
January 21, 2013 at 11:17 am	Waah, waah, waxaasa jaceyl ah war baa ka dhacay waa erayo aad umacaan masha,allah